July 23, 2021 Xuseen 9
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa saacadihii la soo dhaafay ku mashquulsanaa go’aan ka gaarista musharixiinta kuraasta aqalka sare ee barlamaanka Soomaaliya ku matali doonta deegaamada Puntland.
Madaxweyne Deni oo cadaadisyo kala duwan wajahaya ayaa waxaa xafiiskiisa soo gaaray araajiyo badan oo dalbanaya kamid noqoshada musharixiinta xildhibaanada labada aqal gaar ahaan aqalka sare oo uu lee yahay saxiixa ugu dambeeyey ee kahor doorashada barlamaanka.
Xog hoose oo ay heshay Puntlandtimes ayaa qeexaysa in madaxweynuhu liiskii ugu dambeeyey ka saaray shaqsiyaad horay uga mid ahaa aqalka sare oo la sheegay inaysan xiriir wanaagsan lahayn xukuumadda Puntland isla markaana aan waxba u soo dhicin Puntland kadib muddo 5 sano ah oo ay jireen Muqdisho.
Xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ku matali doona deegaamada Puntland ayaa kala bar ka badan noqon doona wajiyo cusub oo aan kamid ahayn barlamaanka waqtigoodu dhammaaday, sida ay caddeyeen ilo wareedyo ku agdhaw madaxtooyada Puntland.
Inkastoo aysan xubnaha aqalka sare ee heer Puntland xiriir wanaagsan la lahayn Villa Somalia haddana waxaa jira shaqsiyaad xilligaan doonaya inay gacan ka helaan si ay markale ugu soo laabtaan dagaalkana ugaga guulaystaan madaxtooyada Puntland.
Horaan ugadayriyay in Puntland curyaaminteeda ay Xamar madaxweyneyaasha Puntland marba mowjad ugufurto, si ay danaha iyo horumarka Puntland madaxdeeda ugasiijeediso oo ugana maashquuliso. Waxaana dabinka Xamar toos ugudhacay Siciid Deni marka lagu jimeeyo madaxdii isaga kahorreysay. Cabdiraxmaan Faroole ayaana aad loogu amaanaa inuu Xamar dhagraheeda kafeejignaa oo runtii abaalkeedana marin jiray inta uu toos uqaaddaco.
Inta uu Siciid Deni caasimadaha Carabaha iyo Afrikada Bari socdaal kumarayo waxaa lagu mashquuliyay siyaasadda suyucsan ee Villa Muqdisho iyo ururinta hantidii laguwiiqi lahaa. Waxaynu weli dhawraynaa Siciid Deni oo laga werinayo inuu waddamada ay qurbajoogteennu dhoobanyihiin iyo caasimadaha aynu bulsho, tacliin, iyo taariikh ahaanba cilaaqadaha soojireenka ah wadaagno booqday oo taageero iyo taakuleyn horumarineed kasoo bisleystay.
Doorashadan Xamar, maalaayacniga ay tahay iyo hantida iyo waqtiga qaaliga ah ee ay Villa Garoowe kukhasaarinayso wax isgeya maba aha xaqiiqdii. Puntland waxay baahi xun uqabtaa in iyada xoogga lasaaro oo dayaca iyo darxumada kusii badanaya maskax iyo maalba lageliyo. Waxaan anigu madaxweyne Puntland oo dhab ah u aqaan oo una aqoonsan doonaa kii malaayiinta doollar ee Puntland xaqeeda ah ee Xamar kagamaqan inuu usoodhacsho wax walba u dabaroga.
Waxaa nasiib daro ah in dawlad dhiskii soomaaliya u baahnayd ay noqotay mid lagu hungoobay taas oo ay lawareegeen dilaaliin uu kamid yahay siciid deni oo sidaan ognahay u shaqeeya imaaraat iyo kenya.
Dal dad kiisa badan kiisu ay ku adag tahay inay helaan saddex da wakhti laba kamid ah waxay quutaan, iskadaa caafimaad, waxbarasho amni, iyo horumar kale ee laga shaqeeya.
Haddii aan dad ka soomaalidu ku baraarugin tuugta, dulaaliinta, musuq maasuqu kuwuu dilooday, ee dib u socod maahee iska diiday inay dad kaan dhiban u shaqeeyan.
Hadaba suura gal maahan in dad waynuhu ay maalin kasta markhaati ka noqdaan mustaqbal koodii uu mugdi sii galaya waa in lahelaa fahan ku aadan kuwaan sidoo kale kacdoon shacab oo lagusoo qaqabto maxkamad na lagusaaro hogaamiye kooxeeda iyo siyaasiin ku sheega.
Kkkkkk qofka la baxay farxaan ee comentiga sooqoray, sxb waxaad u hadlaysaa sidii guulwadayaashii kacaanka waxaadna u egtahay qof ka dhacaan meesha xaalka soomakiya marayo, sxb farmaajo waddani baan ahay ayuu nagu qalday wuxuuna dabada la galay itoobiya waana meedhii uu waligii na dhihi jiray waa cadowga koowaad ee somaliya, carruurtii somaliyeed ayuu farmaajo ka iibsaday eriyteeriya iyo ibeya Axmed, muwaaddin somaliyeed ayuu u dhiibay meeshii uu noosheegay ineey tahay cadowga koowaad ee dalkeenna kkkkkk siciid dani carruurna axmaaro iyo eriteriya kam iibsan mawaaddinna ma dhiibin, haddaba adigu dhego iyo idho wax maqlo malihid miyaa sidee wax laguugu sheegaa mise cudurkii kacaankaa wali ku haya kkkkkkkkk guulwadoow farmaajo kkkk sxb caadi iska dhig oo haddii aadan waxbo fahmi Karin waxna akhrin Karin bal dadka cilmi dhagoodka weyddii si aad u fahanto dhibaatada uu farmaajo dalkaan iyo dadkaan gaar siiyey, madaxweyne dani waxaa uu ka shaqaynayaa sidii dalkaan iyo dadkaan farmaajo looga badbaadin lahaa waa inaad sidaa fahantay saaxiib.
Deni waa ku guulaystay inuu ka difaaco Puntland dhagarihii Farmaajo iyo kooxdiisa, dagaalka Farmaajo ee Jubbaland waa hal ujeedo oo ah in Kismaanyo ku u gacan geliyo reer DIINI iyo Barre Hiiraale, arintaas Puntland waa ku garab istaagtay Jubbaland waana xaq.
xaqiiqdu waa sidaa Farmajo wuxuu raadinayaa oo uu u xusul-dubayaa in Somaliya u gacangaliyo Abi Ahmed, dorashadii hore wuxuu ku soo baxay Farmajo ( cadowgenu waa Ethiopia)
Sxbyaal deni uma aanu dooran inuu xoog iyo xoolaba la dagaalanka xamar ku bixiyo inuu putland horumarkeeda ka shaqeeyo ayaa loo doortay arintaa in ilma adeer nimo lagu difaaco qiil uma hayo ee bal u keena markaad xamar iyo farmaajo xagaa inaga dhigtaan cayduna waa inga reeban tahay mise mareegtani waa ta mooryaatu ku kaftanto
Dadkii ma soo raysanayaan mase anaa Mooday? Waxaa iigu dambaysay ayadoo lagu wada faraxsan yahay in Somalia MINGISTE u gacan gashay MELES ka dhaxlay ABIY Ahmed ka dumaalay, dadkii masoo caafimaaday!! Allaha qaadirka waxba kuma ahan…
Soomaaliya waxay afartii sano ee ugu dambaysey u gacan gashay ma naxayaal, ma damqadayaal,danystayaal ay dantooda gaar ahaaneed ay ka weyn tahay danta dadka iyo dalka. Farmaajo oo jaamacada Syracuse ka soo qaatay conflict resolution with 2.0 GPA oo aad aragteen iskaba daa afqalaade in af-soomaaligii uu u dhashay la daalacayo ayaa Qatar(Doha) oo tab kasta adeegsaneysa xukunkii u gacan gelisey. Durba wuxuu jaal ka dhigtay Abey Ahmed oo wadadii burburka iyo halaaga Ethiopia saaray. Wuxuu ciyaarayaa tabihii halaaga ee Abey Ahmed ( Abey’s play book).
1. Wuxuu ka aqbalay burburinta Federalka
2. Wuxuu kaga dayday in goboladii federaalka ahaa oo la rabey in ay u madaxbanaanaadaan dooroshooyinkoooda ku sameeyo faragelin kuwa gacan ku rimis ahna geysto bal eeg (Hirshabeele, koonfur galbeed, Galmudug) bal eeg isku ekanshaha kuwuu Abey Ahmed geystey ( midka kelinka soomalida xakuma, kan Oromada xakuma, iyo kan amxaarada xakuma). waa nimankii ethiopia ka badbaadin lahaa burburka ay lugaha la gashay, dhihi lahaana war doorashada wakhtigeedii ku qabo iskaba daayoo wayba la safteen.
Qoor qoor, lafta gareen, iyo guudlaawe iyana waa la safteen markii laga kari waayey Farmaajo in doorasho wakhtigeedii ku dhacda uu qabto. arinka ku xigaa waa in uu isku dayo sida walaalkiis Abey Ahmed in uu doorashada boobo dagaalna ku qaado maamulada diidi doona doorashiisa boobka ah isagoo adeegsanaya kuwii gacan ku rimiska ahaa ee Ilma gareen oo wadanku galo dagaalo sokeeye kuwaasoo ka xun kuwii sagaashemeedkii.
Mudooyinkii ugu danbeeyey wadanku wuxuu ku socdey rajo( Hope) ah mar uun baa wax fiicnaandoodaan. maanta tii ayaa meesha ka baxday.